DEPIOTE RAVELOSON LUDOVIC : Naverina ao amin’ny fonjaben’i Morondava
Ny alatsinainy lasa teo no niely ny vaovao tao an-tampon-tanànan’i Morondava fa nahazo fahafahana hanao asa ivelan’ny fonja na “main d’oeuvre pénale” (Mop) ny Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’i Mahabo, Raveloson Ludovic na i Leva amin’ny anarana ahafantaran’ny maro azy. 4 décembre 2019
Eo anivon’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria ao an-toerana ny tenany no manao an’io asa ivelan’ny fonja io. Efa nandalo tompon’andraikitra isan’ambaratongany ny nahazoany alalana hanao izany, araka ny fanazavana. Omaly anefa dia fantatra fa naverina ao am-ponja ity Solombavambahoaka ity.
Voalaza fa tsy hita tao amin’ ilay toerana iasany izay anefany ny saziny ivelan’ny fonja akory ity Depiote ity, ka izay ny antony nisian’ny baiko nidina hamerenana azy any am-ponja indray. Raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana dia nilaza ny lehiben’ny fonjan’i Morondava fa voafonja salama vatana tsara no afaka misitraka ny asa ivelan’ny fonja. Hatramin’izay, hoy izy, dia nilamina tsara ny fanomezana izany ho an’ireo voafonja satria manaja tsara ny lamina sy ny fepetra apetraka amin’izany izy ireo.
Tafiditra ao anatin’izany ny fanajana ny toerana hiasana, ny fanajana ny ora hidirana miasa sy ny ora hivoahana ny fonja handehanana manatanteraka ilay asa. Nambaran’ity tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny fonja ity hatrany fa tokony ho hita mandrakariva ao amin’ilay toerana hiasany ilay voafonja. Fantatra fa tsy toy izany anefa ny tranga tamin’ity solombavambahoaka ity satria tsy tazana tao amin’io toerana voatondro hanatanterahany Mop io ny tenany. Tsy maintsy nandray fepetraka araka izany ny tompon’andraikitra rehetra ka naverina faran’izay haingana ao am-ponja ny Depiote Leva.
Raha tsiahivina dia ny 24 avrily lasa teo ny Depiote Leva no natolotra ny fampanoavana tao Morondava. Vesatra niampangana azy tamin’izany ny raharaha fanimbana ala arovana. Ny volana jona no nivoaka ny didim-pitsarana izay manameloka an’ity olom-boafidy ity dimy taona an-tranomaizina sazy mihatra. Marihana fa efa misy ny dingana ataon’ireo solombavambahoaka eny anivon’ny antenimieram-pirenena mba hampitsaharana ny fanenjehana atao an’ity Depiote ity sy ny Depiote iray hafa. Efa nisy ny taratasy nalefan’ny filohan’ny Antenimierampirenena any amin’ny Praiminisitra sy ny Fitsarana mahakasika izany.